ओमकार टाइम्स एसईईको कुनै मुल्य रहेन : शनिबार हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको प्रश्नपत्र पनि बाहिरियो ! – OMKARTIMES
एसईईको कुनै मुल्य रहेन : शनिबार हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको प्रश्नपत्र पनि बाहिरियो !
काठमाडौं : एसईई परीक्षा अन्तर्गत प्रदेश–२ शनिबार हुन लागेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विषयको प्रश्नपत्र पनि बाहिरिएको छ।
यसअघि बिहीबारको विज्ञान र शुक्रबारको सामाजिक विषयको प्रश्नपत्रसमेत बाहिरिएको थियो।
शनिबारको यो विषयको प्रश्नपत्र सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरिएको हो। टोलीको अध्ययनबाट प्राप्त गरेको सूचनाको आधारमा प्रतिवेदन लेख्ने तयारी गरिरहेको छ। शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनीहरुले प्रश्नपत्र बाहिरिएको जानकारी मन्त्रालयमा गराइसकेका छन्।
प्रतिवेदन अध्ययनपछि शनिबारलगायत अन्य दिनका परीक्षा सञ्चालनबारे के गर्ने भन्ने निर्णय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबारे जानकारी दिन मन्त्रालयले साँझ सात बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएको छ। दैनिक परीक्षा रद्ध हुँदै गएपछि प्रदेश २ का विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन्। कतिपय स्थानमा प्रहरीले विद्यार्थीका गतिविधि नियन्त्रण लिन अश्रुग्याससमेत प्रहार गर्नु परेको छ।